Kusawirirana muZanu PF kuMasvingo Kwotyirwa Kuti Kuchashaisa Bato iri Zvigaro Zvose
Kubvumbi 23, 2018
Bato reZanu PF rinotungamirirwa naVaEmmerson Mnangagwa, rinonzi rinogona kusawana zvigaro zvose muMasvingo nekuda kwemakakatanwa
Vamwe vatsigiri veZanu PF vanoti bato ravo rinogona kutorerwa zvimwe zvigaro zveparamende musarudzo dzegore rino zvichitevera nyonga-nyoga iri mubato iri mukusarudzwa kwevacharimirira musarudzo.
Vatsigiri vazhinji veZanu PF mudunhu reMasvingo vanoti havana chivimbo chekuti bato ravo richatora zvigaro zvose makumi maviri nezvitanhatu zvenhengo dzeparamende zvayakatora musarudzo dza 2013 nenyaya dzekusawirirana kuripo kuti vamwe vakwikwidze pasarudzo dzema primary ebato.
Hutungamiriri hweZanu PF muMasvingo hwakarambidza nhengo nhanhatu dzichiri muparamende kuti dzipinde musarudzo dzebato dzichinzi dzaive dzisingakodzeri kukwikwidza.
Nhengo dzakarambidzwa kukwikwidza ndiVaDenford Masiya, Retired Brigadier Callisto Gwanetsa, VaRobert Mukwena naVaDarlington Chiwa. Nhengo idzi dzinomirira matunhu eChiredzi muparamende.
Vamwe vaviri vari kutadziswa kukwikwidza ndiVaTichafa Madondo naVaEphraim Gwanongodza.
Mumwe mutsigiri aramba kudomwa nezita rake nekutyira hupenyu hwake, anoti bato ravo rinogona kurasikirwa nezvigaro zvakawanda rikasagadzirisa nyaya iyi.
"Paku disqualifier vanhu apa vakaresva, isu hatimbozvitsigiri. Iko zvino vari kubvisa vanhu vatakavhotera vachiisa vatsva, zvakafanana neku impoza.vari kuti kwahwi G40 haisisiko, handiti vakambowana 26 ma constituency? Vanogona kuwana zero chaiyo. Totorova bhora musango."
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kune dzimwe nhengo dzeparamende dzinoti dzakatsikwa konzi muZanu PF.
Asi VaChiwa vanoti hutungamiriri hwe Zanu PF muMasvingo ndihwo hwakatotanga kuita bhora musango.
"Izvo ndozviri kuitwa zvekuti nhingi tamu diskwalifaya, kuto dhikambena musangano nekuti kuzodzoka muchikorekita meseji iri wrong nemafambire anoita meseji mazuvano nesocial media zvinonetsa. Bhora musango rakatoitwa nevanhu vakaita temper around ne ma strucutres emusangano. Kana munhu anga ari branch chairman akangomuka achinzi tamubisa nemunhu anoda kuzomukambenera iro ndobhora musango iro."
Vanoona nezvematongerwe enyika vakazvimirira muMasvingo, VaMasimba Gonese, vanoti zvichanetsa kuti bato reZanu PF ritore zvigaro zvose nekuti richapinda musarudzo riri zinyekenyeke.
"Ndinoona zvichinetsa Zanu PF kuhwina ma constituency 26 ayakahwina muna 2013 nekuda kwemanyongori aripo nenyaya yema primary elections, kunyanya kuChiredzi. Vari kutsutsumwa nenyaya yekuita impose ma candidates kumwewo saka izvozvo ndinoona zvichikwanisa kuderedza mikana yayo nekuti pasara nguva shoma yekusvika musarudzo, zvinobatanidzwawo ne G40 vakadzingwa vaye ne NPF irikuuya yakabva kuZanu PF saka ndoona mikana yavo yakaderera zvikuru."
VaGonese vanoti kunetsana kuri muZanu PF kunogona kupa mukana nhengo dzeMDC Alliance zvigaro zviri mudunhu iri, sezvakamboitika muna 2008.
Sachigaro we Zanu PF muMasvingo, VaEzra Chadzamira, avo vasina ari kuvakwikwidza kuMasvingo West, varamba kutipa pfungwa dzavo panyaya iyi vachiti vakabatikana.
Vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti vari kurambidzwa ava vanhu vanozivikanwa kuti vanotsigira chikwata cheGeneration 40.
Asi munyori wezvemitemo muZanu PF, VaMunyaradzi Paul Mangwana, vanoti munhu anobvumirwa kukwikwidza muZanu PF anofanirwa kunge aine chinzvimbo mudunhu rake.
Zanu PF yakatora zvigaro zvose makumi maviri nezvitanhatu zviri mudunhu reMasvingo muna 2013.
Muna 2008, MDC-T yaive nezvigaro gumi nezvina, Zanu PF iine gumi nezviviri.